Ingabe i-viburnum iphakamisa noma yehlise umfutho wegazi? > Ingcindezi
Amakhambi okwelapha angathuthukisa lesi simo ezifweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi umfutho wegazi ophakeme.
Ngesikhathi senhlupheko ye-hypertensive, kubalulekile ukunciphisa ngokushesha ingcindezi, futhi akudingekile ukuthatha imishanguzo ebizayo uma i-viburnum isiza ngengcindezi.
Kulabo abangaziyo, i-viburnum ikhuphuka noma yehlise umfutho wegazi, yisikhathi sokujwayelana ne-berry ewusizo. Akusizi ngalutho ukuthi kukhulunywa ngayo kubuciko bendabuko, i-viburnum iqukethe amavithamini nezinto eziwusizo ezingakwazi nje ukwehlisa umfutho wegazi we-jumped, kodwa futhi nokubuyisa ubungqabavu futhi kuthuthukise impilo.
Ku-resin yayo, okubomvu kwe-viburnum kuqukethe i-formic, caproic, valerianic ne-acetic acid. Ushukela utholakala ngokuxuba i-fructose ne-lactose, futhi ujusi obomvu we-viburnum uqukethe i-30% yesakhi se-inverter. Imbewu yezithelo iqukethe i-20% yamafutha enempilo, amavithamini A, C, E, PP. Umphumela ozuzisayo we-viburnum emzimbeni kungenxa yokuba khona kwamajikijolo we-phosphorus, i-iron, iodine, i-magnesium, i-potassium. Izinto ze-Pectin zinikeza ukungaguquguquki okufana nokufana ne-viburnum. Ngaphezu kwalokho, lo berry uqukethe ama-saponins, phylloquinones kanye nama-tannins.
Isigcini esinjalo sezakhi eziwusizo siyachaza ukuthi kungani i-viburnum isiza ngosizi lokugula. IViburnum izosiza kahle ngomfutho wegazi ophakeme, ukungasebenzi kwezinso nesibindi.
Izindlela zokupholisa izifo zezifo zomgudu wesisu, isifo sofuba, nesifo samathambo. Isithakazelo esikhulu kubantu ngumbuzo wokuthi kusebenza kahle kangakanani umfutho wegazi ku-viburnum, umfutho wegazi wehla ngokushesha kangakanani, nokuthi umfutho wegazi wehla kangakanani.
Umphumela umfutho wegazi
Ingabe i-viburnum iphakamisa noma yehlise umfutho wegazi? Abantu abane-hypertension ye-arterial noma i-hypotension enzima bavame ukuphoqelelwa ukuthi bahlole umkhiqizo ngamunye wokudla ekudleni kwabo. Kulokhu, umbuzo womphumela we-viburnum ohlelweni lwezinhliziyo uba yinto esemqoka.
Impahla ye-viburnum ene-hypertension iyancipha. Lokhu kusho ukuthi iziguli ezinomfutho wegazi ophezulu zingafaka ngokuphepha imikhiqizo evela kuleli berry ekudleni kwazo.
Ngaphezu kwalokho, umfutho wegazi ophakeme ungaphulukiswa ngokupheka ama-berry. Kepha kubalulekile ukwazi ukuthi i-viburnum yehlisa ingcindezi kancane! Kancane kancane kancane futhi kusetshenziswa ngokuhlelekile kuphela. Ngenxa yalokho, leli bheri ngeke lisindise enkingeni enkulu yegazi.
Izici eziwusizo zamajikijolo ekucindezelweni
Inhliziyo nemithambo yegazi Izithelo ze-viburnum ziqinisa umsebenzi wenhliziyo futhi ziqinise nemithambo. Ukwelashwa kusiza ekulweni ne-atherosclerosis ne-vasospasm.
Umfutho wegazi Ijwayela umfutho wegazi futhi inwebise lonke uhlelo lwenhliziyo. Inomphumela we-diuretic ophimisiwe.
Izinqumo zamagxolo Susa ukopha kwangaphakathi, dambisa ukuquleka, ukuvuvukala.
Sebenzisa ukwelashwa Amajikijolo, ama-decoctions, itiye, ama-tinctures, isiraphu, ujeli, isikwsel, i-compote, imbewu, amagxolo.
Ingabe ama-berry hypotonic ayingozi?
IViburnum iwusizo kakhulu umkhiqizo ongawafaki kokudla ngenxa yomphumela we-hypotensive.
Noma ngomfutho wegazi ongelapheki, ukusetshenziswa kwe-viburnum kuvunyelwe.
Enye inkiniso ebalulekile! Izimbali ze-Bark ne-viburnum empeleni azilinciphisi umfutho wegazi. Ngakho-ke, nge-hypotension, imali esekwe kuyo ingasetshenziswa ngokuphephile. Ngesikhathi esifanayo, amajikijolo ayadingeka ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme.
Kubantu abanovalo olukhulu, umbuzo ophakamayo - uma ibhulashi elinjenge-viburnum liphathwa nge-hypertension, ingabe lokhu kusho ukuthi i-berry inomphumela omubi empilweni yabo? Njengoba sekushiwo ngenhla, ukusetshenziswa kwe-viburnum ye-hypertension akuyona ukuphela kwzuzo yebhele elimnandi. Iyasindisa kusuka kuma-pathologies amaningi, ithambisa umzimba. Mayelana nomphumela wengcindezi, awudingi ukubamba ikhanda lakho njalo lapho ucindezelwa, ingcindezi. Lokhu kuholela ezimpilweni ezithile. Kuyadingeka ukuvumelanisa ngokwengqondo kokuhle, futhi i-viburnum - ngokusetshenziswa okungajwayelekile, akukuthinti ukucindezela nganoma iyiphi indlela. Futhi uma i-hypotonic ifuna ukujabulela ujamu omnandi, angakwazi ukuyikhokhela.
Njengoba kushiwo, izakhiwo ze-antihypertensive ze-viburnum zivela uma uthatha i-tincture noma umxube nsuku zonke esimisweni, uqaphela umthamo nesikhathi sesifundo. Amajikijolo ngokwawo awawona umuthi, kepha angenza elikhulu iqhaza ekwelapheni umfutho wegazi ophakeme nezinye izifo.
Ukuze i-berry izuze, kufanele ilungiswe kahle - iqhwa, yomile noma igaye ngoshukela. Lezi zindlela zizogcina izakhiwo ezinenzuzo ze-berry.
Ukusetshenziswa kwe-viburnum kune-contraindication - ukungabekezeleli komuntu ngamunye, isilonda sesisu, ukukhulelwa, ukondla.
Ukuphuza i-Berry akukhuthaziwe ezigulini ezine-pathologies yezinso, ukuthambekela kokuthambeka komzimba nokungezwani komzimba, okuyisisusa sokwanda kwe-acidity yesisu.
Kungcono ukuthi uthintane nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa noma yiziphi izidakamizwa.
IViburnum yileso sitshalo esiyingqayizivele, okuyinto, ngokomqondo, esingenazo izakhi zalo ekwakhiweni kwaso. Ngenxa yalokhu, amajikijolo abomvu athandwa kakhulu ekwelashweni okuhlukile. Kunamavithamini amaningi ku-viburnum kunezithelo ze-citrus, ikakhulukazi i-ascorbic acid.
Ukwenziwa okuwusizo kwejikijolo:
I-Iron namaminerali amaningi,
IViburnum, kanye nezinye izitshalo, ibhekana ngempumelelo nokubonakaliswa kwe-anemia. I-Organic acid inika ukunambitheka okumuncu kumajikijolo. Banesibopho nephunga elithile.
Imvamisa, i-viburnum ihlangabezana nesikhathi lapho kubanda. Imithi esekwe Berry, futhi ikakhulukazi i-Teas, isiza ukunciphisa izinga lokushisa ngesikhathi esifushane futhi ibhekane nezimpawu zokuqala zalesi sifo. Ngaphezu kwalokho, ebusika, abaningi bethu bahlushwa ukuntuleka kwamavithamini, futhi ukungenisa ejwayelekile kwe-viburnum kuzonikeza ukuvikeleka okuhle kakhulu.
Umphumela oyinhloko we-viburnum emzimbeni wethu:
Umphumela onenzuzo esibindini,
Kuqinisa imisipha yenhliziyo nemithambo yegazi,
Kwandisa ukuminyana kwegazi
Ijwayelekile ukushaya kwenhliziyo,
Isiza ukulwa nobuthi
I-prophylaxis enhle kakhulu yezimo zomkhuhlane.
Ngisho nangemva kokuhlupheka ukubanda, i-viburnum izosiza ukubhekana nokuqhekeka okujwayelekile futhi ingathuthukisa kakhulu inhlala-kahle. Okubalulekile ukuthi i-viburnum iyatholakala ukuthi isetshenziswe nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, ngoba ingafriza noma yenziwe kuyo ujamu omnandi.
Futhi, kufanele kubhekwe ngokukhethekile ukuthi i-viburnum inemiphumela emihle kanjani empilweni yabesifazane. Ngokusetshenziswa kwayo njalo, umjikelezo wokuya esikhathini ubuyela kokujwayelekile, futhi ukopha kuncishiswa kakhulu. Kwaphawulwa futhi ukuthi ngemuva kwesizinda sokusetshenziswa kwamajikijolo okwelapha isikhathi eside, umsebenzi wokuzala ungcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho i-viburnum iwuhlobo lomthombo wentsha, ngoba yandisa ukuqina kwesikhumba nokuqina kwayo.
Izici zokupholisa ze-viburnum zibomvu nge-hypertension
Ukuncishiswa kwengcindezi kwethonya lomfutho wegazi kuvame ukutholakala ngokusebenzisa ama-diuretics ahlukahlukene. Eqinisweni, lo mphumela ungatholakala ngezindlela ezahlukahlukene ezihlukile ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali amakhemikhali. Ngemuva kwakho konke, cishe noma yimuphi umuthi unemiphumela emibi.
Umuthi owodwa ophumelelayo onomphumela we-diuretic yi-viburnum. Futhi, isitshalo, ngaphezu kokunciphisa umfutho wegazi, sizosiza ukubhekana ne-edema. Kulokhu, umphumela we-hypotensive uzonikezwa isikhathi eside ngenkambo ye-viburnum.
Umphumela we-lipotropic okhiqizwe yisitshalo nawo unesandla ekunciphiseni kwengcindezi. Ukunciphisa inani le-cholesterol egazini kanye nokuchithwa kwama-plaque kunikezwa ngenxa yenani elikhulu lama-carotenoids nama-flavonoid ekwakhiweni kwamajikijolo. Ama-amino acid ayizinto zokwakha futhi abamba iqhaza ezinqubweni eziningi ze-metabolic, nakho okubalulekile enkambeni engapheli yesifo.
Ingozi yomfutho wegazi ophakeme
I-Arterial hypertension yisifo esikhohlisayo. Esigabeni sokuqala sokukhula kwayo, isiguli singase singakhathazwa, futhi ngezikhathi ezithile lapho ikhanda nekhanda kungavela khona. Lapho lesi sifo sidlulela esigabeni esilandelayo, izimpawu sezivele zanda, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ungaphuthelwa izibonakaliso zokuqala zalesi sifo futhi ufune usizo lodokotela.
Kodwa noma kunjalo, hhayi kuphela ukwelashwa ngezidakamizwa okusebenzayo ekucindezelweni kwegazi okuphezulu. Kubalulekile ngalesi sikhathi ukuphatha impilo yakho kahle futhi usebenzise ezinye izindlela zalokhu njengezinye izindlela. Ngeke zibuyise ukwelashwa okuyinhloko, kepha zizothuthukisa kakhulu isimo esejwayelekile sesiguli.
Kubalulekile ukuthi iziguli ezinesifo somfutho wegazi zithole ukwazi ukuthi ukuntuleka kokwelashwa okwanele kungaba yingozi enkulu empilweni jikelele ngisho nasekuphileni. Ngemuva kwakho konke, uma ingayinaki ngokwengeziwe inqubo ye-pathological, kulapho iba nengozi enkulu yokuthi ezinye izitho zithinteke. Kulesi simo, izingqinamba zegazi elinamandla ziba yinto eqhubekayo kulezi ziguli.
Izinkinga ezingase zibe khona ze-hypertension zingafaka:
Ukwehluleka kwe-Coronary ne-reso
Ayikho kulezi zinkinga ezodlula ngaphandle kokulandela umzimba, bese imiphumela ingaba yimbi kakhulu. Kungakho ukwelashwa kwe-hypertension kufanele kuphathwe kahle futhi kuzame ukufaka amajikijolo okwelapha ekudleni kwakho kwansuku zonke.
Kuyiqiniso, i-viburnum enomfutho wegazi ophakeme ngeke ikwazi ukuba indawo ephelele yemithi enomphumela we-hypotensive, kodwa inhlala-kahle izothuthuka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ezigulini ezinjalo uhlelo lwabo lomsoco olufanele lwenziwe kancane kancane, oluzoba nomphumela omuhle esizweni sempilo esijwayelekile.
Izindlela zokulungiselela nokulungiselela i-viburnum ye-hypertension
Ukuze isitshalo sigcine ngokuphelele wonke umsoco waso nezinto zaso zokuphulukisa, kufanele sivunwe kahle. Ukushisa okushisa, kanye nezimo zokugcina yilawo maphuzu abalulekile anikeza ukunambitheka.
Ukulonda izakhiwo zokupholisa, zivame ukusebenzisa:
Ukomisa emazingeni okushisa aphansi,
Hlanganisa amajikijolo noshukela noma uju.
Ukukhethwa kwendlela yokuthengwa kwempahla kuzovele kuncike kokuncamelayo kwabanikazi kanye nokuthi kungenzeka ukuthi kugcinwe umuthi okunye. Kepha noma kunjalo, etafuleni lethu uvame ukuthola i-viburnum, enoshukela noma iqhwa.
Indlela elula yokwelapha i-viburnum ukwenza itiye. Ukuze wenze lokhu, thatha amajikijolo kanye namahlumela bese uxova kahle. Okulandelayo, isisindo esidingekayo sifakwa esitsheni esingenamuntu bese sifakwa emlilweni, sigcwaliswa ngamanzi ngaphambili. Itiye elinjalo kufanele libiliswe phezu kokushisa okuphansi cishe imizuzu eyi-10.
Lapho isiphuzo somuthi sesilungile, sivunyelwe ukusifaka bese sihluzwa. Itiye elinjalo, ngaphezu kwe-hypotensive, lizoba nomphumela wokuqinisa ojwayelekile, futhi liyisiphuzo esimnandi kakhulu. Abanye abantu bakhetha ukufaka ushukela noma uju kuyo.
Uma singekho ngokuphelele isikhathi sokwenza itiye elinjalo, ungasebenzisa indlela elula. Kulokhu, amajikijolo, akhonjwe amahlumela, axove kahle endebeni. Ngemuva kwalokho, inhlanganisela ephulukisayo ithululelwa ngamanzi abilayo futhi ayidedele. Isiphuzo esinjalo sizoba yindlela enhle yokwenza ezinye izindlela zokwenza amajikijolo.
I-Morse kusuka ku-viburnum ebomvu evela ekucindezelweni
Ukulungiselela isiphuzo sezithelo esimnandi, uzodinga amagremu ama-500 amajikijolo nelitha lamanzi, uju noma ushukela sekuvele ungeziwe ukunambitha. IViburnum kumele ikhululwe emahlumela bese ifakwa engilazini noma esitsheni esingenalutho. Ngemuva kwalokho, usebenzisa umshini wokucindezela, udinga ukunambitha ngokucophelela ujusi bese uhlukanisa ikhekhe.
Ijusi eliphumayo lithululelwa kwesinye isitsha, futhi ikhekhe lisazodinga ukwenziwa kabusha. Kwehliswa epanini bese kuthelwa ngamanzi. Isisindo esidingekayo kufanele silethwe kumathumba, kodwa hhayi abilayo. Umhluzi ophelile uhlungiwe, lapho usubolile.
I-Morse itholakala ngokuxuba ijusi elisanda kufakwa elisuka kumajikijolo e-viburnum kanye ne-decoction enempilo esekwe kukawoyela. Uma uju ungezelelwa kulo njenge-sweetener, khona-ke izinga lokushisa lesiphuzo akufanele libe ngaphezulu kwama-40 degrees, ngaphandle kwalokho umkhiqizo wokugcina izinyosi uzolahlekelwa yizinto zalo zokupholisa.
Amajikijolo asikiwe noshukela
UKalina kumele ahlelwe kuqala futhi agezwe kahle. Ngemuva kwaloko hlukanani nemisila kanye nehlumela. Amajikijolo aselungiselelwe afakwa epanini elingenamuntu futhi ochotshozwa ngokucophelela ngenhlaka yokhuni. Ingxenye yokulungiswa komkhiqizo onjalo: ingxenye eyodwa yamajikijolo inani elilinganayo loshukela.
Lapho amajikijolo asikiwe ngokuphelele futhi kuvumela ujusi, kufakwe ushukela kuwo. Ubuningi obumpompo kufanele buxutshaniswe kahle, emva kwalokho bubekwe ezitsheni zengilazi. Ukuze ijamu elinjalo ligcineke kabusha ukuvela kabusha isikhathi eside, lifafazwa ngosawoti omncane ngaphezulu bese ufakwa esiqandisini.
Ungamisa kanjani i-viburnum
Ukuze i-viburnum eyomile ikwazi ukunambitha futhi ngasikhathi sinye sigcine izakhi zomzimba, udinga ukukhetha kuphela amajikijolo avuthiwe futhi acishe abe sobala. Ungomisa i-viburnum kuhovini naku-dryer kagesi.
Lapho amajikijolo eselungile, afakwa ezingilazini noma ezitsheni. Ngokuya ngaphansi kwezimo zokugcina, i-viburnum ingagcinwa kuze kube yiminyaka emi-4, ngenkathi igcina zonke izakhiwo zayo ezilusizo. Amajikijolo owomile angafakelwa empahleni ebhakiwe, e-pastille noma adle njengoku yomiswa okujwayelekile.
Ungapheka kanjani amagxolo e-viburnum kusuka ekucindezelweni
Elinye ithuluzi elifakazelwe neliphumelelayo ekwelapheni umfutho we-hypertension kanye ne-atherosulinosis yi-tincture yegxolo le-viburnum. Umuthi onjalo usiza ekujwayezeni umfutho wegazi ngesikhathi esifushane.
Ukuze ulungiselele ukumiliselwa, udinga amagxolo aqabulekile esihlahla. Kwisipuni sezinto zokusetshenziswa ezinjalo udinga ukuthatha ingilazi yamanzi abilayo. I-infusion ilungiselelwe ukushisa okuphansi kwengxenye yehora. Ngemuva kwalokho uvunyelwe ukumisa, bese ehlungwa.
Thatha umuthi ngendlela yokushisa kathathu ngosuku. Umthamo wansuku zonke uzoba ingilazi eyodwa yokufaka. Inkambo yokwelashwa kuleli cala izophela cishe inyanga, khona-ke ikhefu elifushane lingadingeka.
IViburnum yokunciphisa ingcindezi isebenza kakhulu. Umphumela wokwelapha unikezwa ukwakheka kwamavithamini ocebile nokuqukethwe kwezinye izakhamzimba. Ngokusetshenziswa njalo kanye nokuhlanganiswa nokwelashwa okuyinhloko, ungafinyelela imiphumela emihle futhi uthuthukise kakhulu impilo ephelele.
Izici zokupholisa ezibomvu ze-viburnum zikuvumela ukuthi uxhumane naye ukuze uthole usizo ezimweni ezahlukahlukene. I-berry ebabayo-emnandi iyakwazi ukwelapha i-pathologies elandelayo:
izifo zokugaya ukudla
izinqubo zokuvuvukala emalungeni,
Amajikijolo eViburnum acebile ngezinto ezibalulekile zokulandela: phosphorus, iodine, iron, ithusi, ne-potassium. Ngaphezu kwalokho, ama-acid ahlukahlukene, i-phytoncides, ama-tannins, ama-pectins, uwoyela obalulekile, ama-flavonoid nokubukeka okumangazayo kwe-vitamin (C, E, P, K, A) kutholakala kuzo. Ngabe konke lokhu kwehluka kuthinta kanjani inhliziyo nemithambo yegazi?
Ukwehlisa ukucaphuza ngokweqile kohlelo lwezinzwa. Futhi, njengoba wazi, ubamba iqhaza elibonakalayo emisebenzini yale mizimba.
Umphumela we-diuretic wehlisela inani le-edema, wehlise umthamo wegazi, osiza ukusebenza kwemithambo yegazi nenhliziyo.
I-Guelder-rose elwa ne-hypertension Fighters to ubuthi obususa imikhumbi. Lokhu kukuvumela ukuthi usungule ukusakazwa kwamahhala kwama-biological fluid emzimbeni.
Izihlahla ziyi-antioxidant yemvelo. Bahlehlisa umphumela wama-radical wamahhala abhubhisa izindonga zemithambo yegazi.
Ngenxa yezakhi ze-viburnum, kukhona ukuqhekeka kwe-cholesterol eyeqile, ethinta ukwakheka kwezigcawu ze-atherossteotic. Lokhu okugcina kunciphise ukuhamba kwegazi.
Izici ze-antispasmodic zisiza ukwehlisa ithoni ephezulu ye-vascular, gcina kusuka ku-hypertension.
Izinto ezisebenzayo ku-viburnum zingakhuphula amandla ezindonga zama-capillaries, ngenkathi zithuthukisa ukusebenza kwazo, okusiza ngokumelana nengcindezi eyandayo.
Amaminerali angakhuthaza ukukhuthazela kwe-myocardial.
Onke lamaqiniso aqinisekisa izakhiwo ezinenzuzo ngaphansi kwengcindezi ye-viburnum. Ishintsha i-tonometer enkambini encane, ekuvumela ukuthi uphathe ngempumelelo i-hypertension.
Abalandeli bomuthi wendabuko bavame ukungabaza ngokusetshenziswa kwamajikijolo we-hypotension: i-viburnum iyithinta kanjani impilo kuleli cala? Izithelo zezokwelapha zinciphisa imithambo yegazi, zisuse uketshezi emzimbeni, zinciphise ukuqina kwezindonga zemisipha, kancane kancane zinciphisa ingcindezi. Kepha isenzo sezithako ezisebenzayo siyenzeka kancane kancane, baqongelela ukusebenza kwabo ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, i-viburnum ayikwazi ukulimaza i-hypotonic, ikakhulukazi uma kungekho ukusetshenziswa okuhlelekile. Kodwa-ke, futhi ayikwazi ukuguqula i-tonometer ekucindezelweni okuncishisiwe.
Imiyalelo yokwelashwa kwe-viburnum ye-hypertension
Ungayipheka kanjani i-viburnum evela kumfutho wegazi ophakeme? Kunezindlela eziningi zokupheka. Ungabathola yonke indawo: kumamagazini, izincwadi, kwi-Intanethi, kuthelevishini. Nazi ezinye zazo.
Thatha uKalina ngenani elidingekayo. Bala kanje: wezipuni ezimbili zezithelo zesitshalo engilazini yamanzi. Beka konke lokhu ngomlilo, ulethe kumathumba, upheke emlilweni ophansi imizuzu engama-20. Umuthi uvunyelwe ukuma isikhashana, bese uhlanzwa futhi udliwe okusha. Umkhiqizo olungiselelwe uthinta ngempumelelo umfutho wegazi.
IViburnum isiza nengcindezi ngesimo segxolo. Ukuze wenze lokhu, kufanele ichotshozwe ibe yimpuphu. Hlanganisa isipuni esisodwa sento ephumela naso 500 ml wamanzi. Vumela ingxube ibilise. Ngemuva kokususa emlilweni, cindezela amahora amaningi. Cwilisa bese uphuza ukwelapha umfutho wegazi ophakeme. Inkambo enconyiwe yinyanga. Umthamo wokuphathwa ngesikhathi uhhafu wengilazi. Umuthi udliwa kathathu ngosuku, ngemuva kokudla.
I-tincture ngotshwala izonciphisa ingcindezi kahle.
Hlanganisa isigamu sekhilogremu yezithelo no-500 ml we-vodka.
Beka esitsheni esinomoya ongangeni kude nelanga.
I-tincture ilungiselelwe cishe inyanga. Kudinga ukuxutshwa ngezikhathi ezithile.
Lapho umkhiqizo usulungile, udinga ukuwuphuza kathathu ngosuku ngemuva kokudla. Umthamo owodwa isipuni. Ukuchayeka ngomuthi kufanele kwenziwe kuze kube yilapho izimpawu ziphela ngokuphelele.
Ikhambi eliphumelelayo lokuthola umfutho wegazi ophezulu iyi-viburnum juice. Udinga ukukupheka ngale ndlela: uthele amajikijolo avuthwe kahle ngesendlalelo eziningana sikashukela (ungathatha uju). Izithako zithathwa ngamanani alinganayo. Lapho kuphuma ujusi, uthele uthele izimbiza bese ugcine emakhazeni. Ukwemukela isiphuzo esilungiselelwe: kathathu ngosuku ngesisu esingenalutho isipuni, yidla ngemuva kwemizuzu engama-30.
I-Guelder-rose from pressure, iresiphi elula.
Ingxube yokuphulukisa emnandi kakhulu futhi enempilo itholakala kuju lwe-linden kanye namajikijolo e-viburnum. Hlanganisa zombili izakhi, uthathe inani elifanayo lalowo. Ngaphambi kwalokhu, dlulisa izithelo zesitshalo nge-grinder yenyama. Lapho isisindo esivele sikhona sime kancane, singadliwa. Ukuze wehlise umfutho wegazi ophakeme, kufanele udle isipuni ngaphambi nje kokudla, kathathu ngosuku. Kunconywa ukuphathwa ngale ndlela izinsuku eziyi-15.
Isiphuzo esilandelayo sizosiza ukuvikela ukuvela kwezinkinga ezinkulu zegazi. Ukwenza ujusi wezithelo kusuka ku-viburnum, udinga ukuthatha amajikijolo amasha noma aqandisiwe uwafake emanzini (isigamu selitha elilodwa lesithelo sendebe engu-1/2). Ngemuva kwalokho udinga ukugeza kwamanzi, udinga ukucubungula i-viburnum ngale ndlela imizuzu engu-15. Ngemuva kokuhlunga umhluzi ophumele, engeza uju kuwo. Ungayiphuza kaningi ngosuku, ngesikhathi uphuza i-50 ml. Ithuluzi lizokwazi ukuthinta izinkomba ze-tonometer ngemuva kwenkambo yokwelashwa, okumele iqhubeke kuze kube yilapho umphumela owufunayo uvela.
I-Viburnum isiraphu yokucindezela
Amajikijolo ageziwe we-viburnum akhanywa ngokucophelela.
Okusele ngemuva kokuhlukaniswa kwejusi kumele kubekwe emanzini bese kupheka imizuzu eyi-10.
Lapho umhluzi usupholile, kufanele udlule nge-cheesecloth.
Bese engeza uju nejusi le-viburnum.
Yidla ngaphambi kokudla ngakunye ngemizuzu engama-30. Umthamo owodwa - 2 wezipuni.
IKalina enomfutho wegazi ophakeme isetshenziswa ngokuhlangana nezinye izithelo. Thatha i-hawthorn ne-rose yasendle ngamanani alinganayo. Faka amajikijolo amaningi we-viburnum kubo. Thela amanzi (thatha u-1 tbsp. L. Kuzo zonke izingxenye ngengilazi ngayinye), letha le ngxube ku-thumba bese ubila imizuzu emi-5. Lapho-ke umhluzi owelapha ushiywe ihora, uvala isivimbo. Ngefomu elikhubazekile, umkhiqizo usetshenziswa ekuseni nge-100 g, ubheka isikhathi sosuku olulodwa. Kungcono ukuthi siphathwe ngale ndlela ngaphambi nje kokufika kwamakhaza asebusika, futhi siphinde futhi isifundo ekuqaleni kwentwasahlobo.
Isiphuzo esinempilo esithinta ingcindezi senziwa ngokuya ngale ndlela yokupheka. Izithako
uju - 250 g
amanzi - 3 l
izimbali ezomile ze-marigold - 50 g,
ijusi le-viburnum - 500 ml.
Ama-inflorescences apheka ukushisa okuphansi imizuzu emi-5.
Faka umhluzi amahora ayi-12
Thela ijusi le-viburnum uhlanganise noju.
umthamo - 100 g.
Amajikijolo we-viburnum ebomvu nge-hypertension anconywa ukuthi asetshenziswe ngendlela entsha, ekhishwe ehlathini. Ukunikeza ukunambitheka okumnandi kakhulu, kufanele kufafazwe ngoshukela noma uthele uju. Ngokufaka njalo izithelo ezizuzisayo kwimenyu yakho, ungahlala unakekela umfutho ojwayelekile.
Ukusetshenziswa kwemithi yendabuko kudinga isimo esibucayi. Uma ungazijwayeli ngokuphelele imininingwane ephathelene nezakhiwo zesitshalo esithile, kanye nemithetho yokusetshenziswa kwaso, ungahle ungawutholi umphumela owuthandayo. Isibonelo, kufanele wazi: i-viburnum isiza nge-hypertension, noma yenyusa ingcindezi? I-berry ayikwazi ukwelapha i-hypotension. Kepha ngasikhathi sinye, ngosizo lwamagxolo, izithelo noma amaqabunga esihlahleni, kuzokwazi ukuqinisa izitsha nenhliziyo. Izakhi zezitshalo zingabuye ziqinise umfutho wegazi ophakeme. Ukuphambana okungenzeka kufanele kubhekwe, umthamo, indlela yokulungiselela kanye nesikhathi sesifundo kufanele kubhekwe ngokuqinile. Ngaphandle kwalokho, ukwelashwa kuzoba ukulimaza impilo kuphela.
Viburnum ukwehlisa ingcindezi
Kodwa-ke, abelaphi bendabuko bangeluleke ukuthi ulungiselele kusuka ku-viburnum ithuluzi elikhethekile lokunciphisa umfutho wegazi, osebenza ngobumnene futhi, ngasikhathi sinye, ngempumelelo. Ukuze wenze lokhu, gcoba izipuni ezi-3 ze-viburnum nesipuni esisodwa soju bese ugcine ingxube isendaweni efudumele okungenani amahora angu-2. Lokhu kuyithamo yomuthi yansuku zonke, okudingeka ukuthatha isipuni esisodwa izikhathi 4 ngosuku emva kokudla. Inkambo yokwelashwa iyodwa, noma kunjalo, ukuqinisa umfutho wegazi, kunconywa ukusebenzisa le ngxube ye-berry-uju okungenani amaviki ama-2.
Amafutha amaningi abalulekile abuye atholakale egxolweni le-viburnum, elingasetshenziswa futhi ukulwa ne-hypertension, uma ungazange ube nesikhathi sokuthola amajikijolo alesi sitshalo sokupholisa ebusika. Amagxolo kufanele agezwe kahle, omiswe futhi aqunywe, emva kwalokho isipuni esisodwa kufanele sigcwaliswe ngu-0.5 ml wamanzi, alethwe ngamathumba futhi agcizelelwe ku-thermos imizuzu engama-30 kuya kwengama-40.. Ngemuva kwalokho umhluzi udinga ukuhlungwa futhi ngendlela efudumele ukuphuza i-100-150 ml ngemuva kokudla ngakunye. Ukuze ungagcini nje ngokunciphisa umfutho wegazi, kodwa futhi uhlanze izindonga zemithambo yegazi, udinga ukusebenzisa i-decoction enjalo inyanga, bese kufanele uthathe ikhefu elifushane. Uma ingcindezi iqala ukukhuphuka futhi, khona-ke udinga ukuqala kabusha ukwelashwa.
Kungani i-viburnum ilusizo kangaka
Ngaphezu kwe-ascorbic acid, i-viburnum iqukethe amavithamini B9, A, E, K. Futhi, i-organic complements - tannins, pectins, carotene.
Uma i-viburnum okungenani ibakhona ekudleni kwansuku zonke, khona-ke iyanikeza:
ukunqanda umkhuhlane, ukuquleka, i-anemia,
ukuthambisa ukukhwehlela, ukunciphisa izinga lokushisa lomzimba eliphakeme,
ukuthuthuka kwenhliziyo nemithambo yegazi,
ukususwa kovalo, injabulo ngokweqile,
ukwehla kwamandla okuphuma kwegazi okukhona,
imiphumela elexative and diuretic (imnene kakhulu futhi ayinalo ulaka, njengoba kwenzeka lapho kuthatha amaphilisi afanele),
impilo yezinwele, isikhumba namazipho.
Ngaphezu kwezithelo, umuthi wendabuko usebenzisa amagxolo, izimbali namaqabunga. Kodwa-ke, i-berry namanje okufinyeleleka kakhulu, ifakiwe engxenyeni eyinhloko yezindlela zokupheka.
Ingabe i-viburnum ingakhuphula ingcindezi?
Ngokuvamile, amajikijolo kanye namagxolo e-viburnum ayingxenye yemithi yesintu, eklanyelwe ukukhipha umuntu kwezinye izifo - umkhuhlane, ukopha kwangaphakathi, izinhlobo ezahlukahlukene zokwaliwa yilesi sifo. Kodwa uma uhlushwa i-hypotension, khona-ke kuphakama umbuzo onengqondo ngokuphelele: kufanelekile ukuthatha i-viburnum, ekwazi ukuqhubekisa umfutho wegazi ophansi. Ochwepheshe bathi awudingi ukuyeka izidakamizwa ezinjalo. Okokuqala, i-viburnum isebenza ohlelweni lokujikeleza ngobunono kakhulu, futhi ngomfutho wegazi ophansi ayikwazi ukukhipha amandla noma isiyezi esinzima. Okwesibili, "isebenza" kumgomo we-drive. Mina. uwoyela obaluleke kakhulu uzinza emzimbeni, lapho umphumela we-hypotensive uzoba namandla ngokwengeziwe. Hhayi, futhi okwesithathu, akekho umuntu okuhlupha ngemuva kokuthatha umuthi ukuphuza inkomishi yekhofi, ngakho-ke qiniseka ukuthi uqinisekile - i-viburnum ngeke ilimaze impilo yakho.
Ungavuna nini futhi kanjani i-viburnum
Amajikijolo kuvunwa ngoSepthemba - Okthoba. Isikhathi esiqondile sincike esifundeni nakwisimo sezulu. Kudinga isimo sezulu esomile ukuqoqa.
Amajikijolo, ukuze angonakalisi, asuswa kanye neziqu, ezisuswa kamuva ngaphambi kokucutshungulwa. Ngokuvamile, izinhlangano ezikhethekile (amapulazi) zihlanganyela ekuvuneni i-viburnum nokuthengiswa okulandelayo.
Ungayipheka kanjani i-viburnum ebusika kusuka ekucindezelweni? Indlela elula kakhulu yokuyiqhulula. Kungcono ukukhetha iziqukathi zepulasitiki zevolumu encane (efanelekile ukugcina ukudla emazingeni okushisa aphansi). Lokhu kusheshisa uqhwa, futhi emuva kwesikhathi kukuvumela ukuthi unciphise amajikijolo, uma kunesidingo, ezingxenyeni ezifanele.
Enye indlela yokuvuna ukomisa. Kungenziwa kuhhavini ngamazinga okushisa aphansi (cishe i-50˚) kanye ne-ajar yomnyango. Amajikijolo kufanele anciphe, kepha awakwazi ukukhandwa ngamatshe.
Izici eziwusizo ze-viburnum
Okokuqala nje izifo zesistimu yenhliziyo. Imvamisa inkomba yalezi zifo umfutho wegazi ophakeme. Iziguli ezinesifo esinjalo zibizwa ngokuthi yiziguli ezinomfutho wegazi. Eqa umfutho wegazi uyingozi kakhulu empilweni futhi kungaholela emiphumeleni engathandeki. Imithi isiza ukujikisa umfutho wegazi. Umuthi wendabuko unikeza ikhambi lemvelo lokwelashwa kwezifo zenhliziyo - i-viburnum. Sizokuqonda ukuthi i-viburnum ithinta kanjani umfutho wegazi.
Izici ezinenzuzo zamajikijolo ngaphansi kwengcindezi zimi kanje:
ukuvimbela ama-cholesterol plaque,
ukuqinisa iziqu nokwanda kwazo,
izinga lokushaya kwenhliziyo
ukuqeda uketshezi olwedlulele.
Kalina ifaka ekwakhekeni kwalo:
Amavithamini akhuthaza ukungatheleleki kanye nokuqina kwegazi. Amafutha awavumeli i-cholesterol ifakwe emikhunjini. Kunokulimala okusheshayo kwamanxeba nezilonda. UKalina unezenzo ezilandelayo:
Ama-berry anika umzimba izinto ezuzisayo zokulandela umkhondo. Inzuzo i-viburnum enomfutho wegazi ophakeme, ngoba ithinta kahle uhlelo lwenhliziyo. I-HELL ibuyela kokujwayelekile ngemuva kokusetshenziswa kwemali equkethe i-viburnum. Ngakho-ke, akukho kungabaza ukuthi i-viburnum izonciphisa ingcindezi.
Iphakamisa noma yehlise ingcindezi ye-viburnum?
Kalina ubhekwa njengelinye lamajikijolo aphilile kakhulu akhula nathi. Ngenxa yokuqukethwe kwezakhi ezibalulekile zeMicro nama-macro, amavithamini, ama-organic acid, ama-flavonoids, ama-pectin, ama-tannins nezinye izinto ezithile, kunezindlela ezahlukahlukene zokwelapha futhi zingasetshenziswa ekwelapheni izifo eziningi, kusukela emakhazeni futhi kugcina nge-oncology.
Uma usebenzisa le berry ngezinjongo zokwelapha, ungakhohlwa ukuthi nayo inezimpawu ezithile futhi ingadala nemiphumela emibi eminingana. Ikakhulu, abantu abahlushwa izinkinga zomfutho wegazi kufanele bazi ukuthi ngabe i-viburnum ebomvu inyuka noma yehla umfutho wegazi obomvu, nokuthi kungenzeka yini ukuyisebenzisa kwiziguli ezinomfutho wegazi ophakeme noma wegazi. Sizobhekana nalezi zingqinamba.
Yehlisa noma ikhulisa ingcindezi ye-viburnum?
Ngaphambi kokuphendula umbuzo, ingabe itiye nge-viburnum nezinye izindlela ezisuselwa kulo ziyanda noma zinciphisa ingcindezi, sizobheka ukuthi leli berry linamthelela muni ohlelweni lokujikeleza umzimba wonke. Ngokwezifundo kanye nesipiliyoni sesikhathi eside sokusebenzisa i-viburnum kwezokwelapha, ukusetshenziswa okuhleliwe kwamajikijolo noma amalungiselelo asuselwe kuwo kubangela imiphumela elandelayo efanelekile emzimbeni:
baqinisa izindonga ze-vascular, bandisa ukuqina kwabo,
umphumela we-antissteotic (ukuvimbela ukubekwa kwe-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi nokuncipha kwenqwaba yama-cholesterol egazini),
Ngaphezu kwalokho, i-viburnum isiza ukususa uketshezi oluningi emzimbeni, i.e. inomphumela wokugaya, ngaleyo ndlela unciphise inani lokujikeleza kwegazi emithanjeni. Ngenxa yalokhu, ukuncipha kwengcindezi yegazi kutholakala - umphumela we-hypotensive. Ngakho-ke, lo bheri usasiza ukwehlisa ingcindezi, futhi le mpahla ye-viburnum ingasetshenziswa ekucindezelweni okuphezulu ukuze uyijwayeze.
Kepha kufanelekile ukubheka ukuthi umphumela owelapha owusizo we-viburnum ungaba nezigaba zokuqala nje zomfutho wegazi ophansi futhi ungaphansi kokusetshenziswa okuhleliwe okuhleliwe. Kukhona izindlela eziningi zokusebenzisa i-viburnum ezigulini ezinomfutho, futhi izidakamizwa azilungiselelwe hhayi ngesisekelo sezithelo, kodwa futhi ngesisekelo samagxolo, izimbali namaqabunga e-viburnum. Iresiphi elula itiye (ukumnika) yamajikijolo e-viburnum, ukulungiselela kwayo kufanele uthele izipuni ezimbili zamajikijolo achotshoziwe engilazini yamanzi abilayo bese ugcizelela imizuzu embalwa.
IViburnum ngaphansi kwengcindezi encishisiwe
Umbuzo uhlala uvulekile: kuthiwani ngabantu abahlushwa umfutho wegazi ophansi? Ngabe i-guelder-rose iqinisekiswe ngokuphelele ukuthi ihlinzekelwe ama-hypotensives? Iningi lochwepheshe liyavuma ukuthi ngomfutho wegazi ophansi, i-viburnum ingadliwa, kepha ngokulingana nangesikhashana esifushane. Mina. ngokwesibonelo, lezi ziguli ngeke zilimaze, kepha, ngokuphambene nalokho, zizosiza, inkomishi yetiye nge-viburnum, ephuzile ebusuku ngaphambi kokulala, ngomkhuhlane isifo. Lokhu kungenxa yokuthi umphumela we-viburnum emzimbeni umnene kakhulu, futhi uma kuncishiswa ingcindezi ezinzile kufanele isetshenziswe ngokuqhubekayo okungenani isonto.
Ngaphezu kwalokho, ukuvimbela umphumela we-hypotensive we-viburnum, ungakwazi ukuhlanganisa ukusetshenziswa kwawo nenkomishi yekhofi, itiye elinamandla, ucezu lukashokoleti omnyama, njll. Ngakho-ke, ngokusetshenziswa okufanele kwemikhiqizo esekwe yi-viburnum, ayikwazi ukulimaza iziguli ezinama-hypotensive uma kungekho okunye okuphikisana nokusetshenziswa kwazo. Ngakho-ke, i-viburnum ayikwazi ukudliwa ngesikhathi sokukhulelwa, isilonda esiswini, i-acidity ephezulu, ukuthambekela kwe-thrombosis.
Ingabe i-viburnum inyusa umfutho wegazi noma yehlise?
Abathandi abaningi bokuphila okunempilo banesithakazelo embuzweni, ingabe i-viburnum inyusa ingcindezi noma yehlise? Ukuphendula umbuzo, kufanele ucabangele ngokuningiliziwe ukuthi yiziphi izakhiwo eziwusizo le berry enazo, ukuthi lithinta kanjani izinga lokucindezela, ukuthi lingasetshenziswa kanjani kahle.
ISINQUMO SOKUVUNYWA Kogogo UKUTHENGA KOKUTHENGA KWAMAHHALA Ukuze ingcindezi ihlale ijwayelekile, kuyadingeka. Buyekeza Umlando wami giperoniinet.ru
I-E. Malysheva: PRESSURE izohlala ingu-120/80, uma uthatha ikhambi elishibhile. Izindlela ezintsha zokwelashwa. Dinga njalo ekuseni. Ingxoxo noMalysheva malisheva.ru
Inhloko ye-Institute of Cardiology of the Russian Federation: Ukuze ubhekane nengcindezi futhi usindise impilo yakho, udinga ekuseni. Ukucindezela kwe-Pressure kuzoba kudala, imithambo yegazi izoba sesimweni esihle uma uphuza nsuku zonke. Ministry of Health iwebhusayithi Ukubuyekezwa Izingxoxo minzdrav.ru
Abaningi babafundi bethu basebenzise ngenkuthalo indlela eyaziwayo ngokususelwa kwizithako zemvelo, ezitholwe ngu-Elena Malysheva, ekwelapheni IZIVIVINYO ZEMPILO. Sincoma ukuthi uzijwayeze ngayo.
Umshini wokwehlisa umfutho wegazi nokusetshenziswa kwe-viburnum
Amafutha abalulekile, akhona ngamanani abalulekile ekwakhekeni kwe-viburnum, abe nomphumela obonakalayo wokugaya. Ngokusetshenziswa okuyikho kwe-viburnum ekudleni, wonke uketshezi olwedlulele emzimbeni lukhishwa ngokwemvelo. Umthamo wegazi elijikeleza ezitsheni uyancipha. Ngenxa yalokhu, kuba nomphumela we-hypotensive, okungukuthi, ukwehla kwengcindezi yegazi.
Umphumela we-lipotropic we-flavonoids, ama-carotenoid, ama-amino acid wamahhala, okuyingxenye ye-viburnum, unesandla ekucindezelweni okujwayelekile, okusho ukuhlanza izindonga zemithambo yegazi ye-cholesterol plaques.
Kuyadingeka ukunaka iqiniso lokuthi hhayi ukusetshenziswa kwamajikijolo e-viburnum kuphela, kepha futhi nama-decoctions avela kwezinye izingxenye zesitshalo esibekiwe kuzosiza ukunciphisa ingcindezi.
Ngokucindezela okuncishisiwe, ochwepheshe beluleka ukuthi bangayilahli amajikijolo anempilo nakancane, ngezikhathi ezithile bawadle bengabanjwa. Umphumela we-antihypertensive we-viburnum ungancishiswa uma uhlanganisa ukusetshenziswa kwawo nokudla noma iziphuzo ezikhulisa umfutho wegazi: itiye elinamandla, ikofi noma ushokoledi omnyama.
Naphezu kwezakhiwo ezihlukile ze-viburnum, kukhona ezinye izinto eziphikisayo ngokusetshenziswa kwaso. Kwenqatshelwe ngokuphelele ukusebenzisa amajikijolo kubantu abachaphazelwa ukubopha kwegazi, okuyisimo esinamandla sokwehluleka kwezinso nesifo somgudu wesisu. Akuvumelekile ukusebenzisa amajikijolo e-viburnum abesifazane besikhathi sonke sokukhulelwa.
Ukusetshenziswa kwe-viburnum ngokuya ngayo yonke imithetho
Ukuze umfutho wegazi ophansi wehlise i-viburnum nengcindezi, futhi ugcobise umzimba wakhe ngezinto eziwusizo, kufanele wazi ukuthi ungawugcina kanjani futhi uwulungiselele kahle.
Njengoba sesifunde ngokucophelela izindlela zika-Elena Malysheva ekwelapheni i-HYPERTENSION nokucindezela kwe-pressure, kanye nokubuyisela ithoni ye-VESELS, sanquma ukuyinaka.
Izinhlobo ezilandelayo zamalungiselelo zifaka isandla ekugcinweni kwazo zonke izakhiwo ezizuzayo zamajikijolo:
Namuhla, kunezindlela eziningi zokupheka zokupholisa, okuyisisekelo sayo yi-viburnum. Kepha kaningi isetshenziswa ngendlela yeziphuzo zezithelo, itiye, i-decoction, uju. Ungadla amajikijolo amasha nsuku zonke isipuni esisodwa.
Ukupheka iziphuzo zezithelo akunzima. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuthatha 4 wezipuni amajikijolo bese, ngemuva kokugaya kahle, uthele ngamanzi abilisiwe ngenani le-0,5 l. Isiphuzo sezithelo kufanele siphekwe kubhavu wamanzi cishe imizuzu eyi-15 ukuya ku-20. Isiphuzo esinempilo kufanele sidakwe i-50-70 g ngemuva kokudla ngakunye.
I-decoction ivame ukulungiswa kusuka kumagxolo e-viburnum, okudingeka uphuze izikhathi eziyi-100 g kathathu ngosuku ngenyanga. Ukulungiselela umhluzi, udinga ukuthatha u-1 tbsp. l igobolondo le-viburnum elichobozekile kahle, engeza isigamu selitha lamanzi ahlanzekile bese uletha kumathumba. Ngemuva kwalokho umhluzi uyadingeka ukuthi ugcizelelwe ku-thermos.
Ukuphulukisa uju kulungiselelwe kalula. Kuyadingeka ukuxuba ngamanani alinganayo amajikijolo agcotshisiwe we-viburnum noju. Bese ubekezelela ukwakheka okuvela endaweni efudumele amahora amaningi. Uju lweViburnum kufanele lubhujiswe nsuku zonke, kungenzeka ngetiye.
Ngenxa yomthelela othambile we-viburnum emzimbeni, umphumela wokwelashwa ngeke ubonakale ngokushesha. Uhlobo kuphela oluhlelekile kanye nesikhathi sokuthatha amakhambi emvelo kusuka ku-viburnum okuyokwenza kube yodwa ukucindezela kweziguli ezinomfutho wegazi ophakeme.
Ngakho-ke, ukwazi ukuthi umkhiqizo othile ukhulisa ingcindezi noma uwusehle kanjani, ungaqamba ngokufanele imenyu yansuku zonke. Ukudla okufanele, ukukhishwa kwezimo ezicindezelayo, indlela yokuphila enempilo izokwenze kube yingcindezi isikhathi eside.
Futhi okuncane ngezimfihlo.
ikhanda, ukubona okufiphele, amachashazi amnyama phambi kwamehlo (izimpukane).
ukuzindla kwenhliziyo, ukufushane komoya ngisho nangemuva kokuzivocavoca okuncane komzimba.
ukukhathala okungamahlalakhona, ukungakhathaleli, ukuhawukela, ukozela.
ukuvuvukala, ukujuluka, ukushuba nokushiswa kweminwe.
Iphakamisa noma yehlise ingcindezi ye-viburnum
Ngakho-ke, ngaphezu kwazo zonke izakhiwo ezizuzayo, i-viburnum lowers noma iphakamisa umfutho wegazi ophakeme. Ngenxa yamafutha asendalweni, anomphumela wokugaya, uketshezi luqedwa masinyane emzimbeni. Ngakho-ke, ukwelashwa kwe-viburnum hypertension kuyasebenza.
Ngokusetshenziswa njalo kwamajikijolo, kunciphisa umfutho wegazi hhayi kanye, kepha kuthuthukisa isimo sesiguli isikhathi eside. IViburnum iyi-berry, izakhiwo ezinenzuzo zazo ezizothuthukisa impilo yesiguli, ibuyise umsebenzi kanye nekhono lezikejana ukuzivumelanisa nezinguquko ezimeni zangaphandle. Ngenxa yalolu shintsho lwesimo sezulu, ungaphila kalula. Ngakho-ke, i-viburnum evela ekucindezelweni isetshenziswa kabanzi ekusebenzeni, kunconywa odokotela.
Ukulwa ngempumelelo ne-viburnum kusuka kumfutho wegazi ophakeme, ungapheka ngezindlela ezihlukile. Ungapheka kanjani i-viburnum? Indlela elula kunazo zonke ukucwilisa ujusi. Thatha kuphela amajikijolo akhethiwe we-viburnum nge-hypertension noshukela oxutshwe nalutho. Yomibili imikhiqizo kufanele ilingane ngokulinganayo. Mboza umkhiqizo ngoshukela bese ushiya ubusuku emazingeni okushisa asekamelweni. Ijusi lizovela lodwa. Umkhiqizo ophumela lapho kufanele uthathwe kathathu usuku lonke. Kumuntu omdala, umthamo u-1 isipuni. Isikhathi sokwelashwa sincike ebukhali balesi sifo kanye nesithombe sonke sezempilo. Ukufeza umphumela omkhulu, phuza ujusi njalo.
I-viburnum ewusizo evela ekucindezelweni kwegazi, iresiphi elula kakhulu, ngokufakwa noju. Ukuze uthole inzuzo ephezulu, udinga ukunamathela kubuchwepheshe bokulungiselela umkhiqizo wezokwelapha. Ukuze wenze lokhu:
kuthathwa izipuni ezinhlanu zomkhiqizo,
isigaxa sihlikihlwa ngesihlungo,
ingxube ephumayo ihlanganiswa nengilazi yoju lwemvelo.
Umuthi olungiselelwe kufanele ube phansi kuze kutholakale isisindo esiningi. Umuthi uzosiza nge-hypertension uma uthatha isipuni nsuku zonke ngaphambi kokudla kwasekuseni.
Enye iresiphi enoju:
yenza ijusi kusuka ku-viburnum,
85 ml wejusi oxutshwe ne-100 ml wamanzi abandayo,
engeza isipuni sokuphathwa kwezinyosi.
Ingxube elungiselelwe yanele izinhlelo ezintathu. Sebenzisa njalo emahoreni ayisishiyagalombili ngaphambi kokudla. Isikhathi sokwelashwa okunjalo kufanele sibe okungenani amasonto amabili.
Ukuzwa umphumela we-viburnum, kuthatha izinsuku ezingama-30 kuye kwezingama-70 zokwelashwa okuqhubekayo. Okulandelayo, udinga ukuthatha ikhefu izinyanga eziyi-1-2 futhi isifundo singaphindwa. Isheduli yokugcina "yokwelashwa kweKalina" kufanele ixoxwe nodokotela wakho.
Izindlela zokupheka ezilusizo ezigulini ezinesifo segazi:
Iresiphi ethandwa kakhulu ye-viburnum evela ekucindezelweni ibheri ebunjiwe noju.
Izithako kufanele zithathwe ngokulingana okulinganayo, kuxutshwe futhi kugcizelelwe amahora ambalwa. Gcina ingxube esiqandisini, bese uthatha izikhathi ezi-3-4 ngosuku ngesipuni.
Indlela elula yokwelapha. Kuyadingeka ukusula ijusi kusuka amajikijolo amasha bese uqhwa besebenzisa isikhunta noma izikhwama ezikhethekile. Kamuva, umpe ungafakwa eteyeni noma usetshenziselwe ukwenza iziphuzo zezithelo nejeli.
Morse. Udinga amajikijolo amaningi asanda kufakwa kumathebula ayisihlanu (ungasebenzisa iqhwa futhi unqunyiwe). Sula amajikijolo ngokusebenzisa ngesihlungo esitsheni esingenacala, uthele uhhafu welitha lamanzi afudumele. Cwilisa ingxenye yesine yehora kubhavu wamanzi, uhlobo, noshukela ukunambitha. Phuza isiphuzo sezithelo 50 - 70 ml izikhathi ezinhlanu ngosuku ngezikhathi ezithile ezilinganayo.
Ukulungiselela i-tincture ye-viburnum, udinga ama-0.5 amalitha we-vodka noma ama-cahors (inketho yesibili iyathambile futhi i-tastier). Isigamu sekilogremu lamajikijolo ahlanjululwe kufanele athululelwe ebhodleleni lengilazi emnyama futhi athululelwe ngotshwala ukuze amboze kuphela amajikijolo. Cwilisa usuku, engeza i-vodka esele (iwayini) esele. Ngemuva kwalokho gcizelela amasonto amathathu kuya amane, indawo kufanele ibe mnandi futhi ibe mnyama. Hlikihla i-tincture ephumayo, ngenkathi uncindezela amajikijolo. Gcina umkhiqizo esiqandisini. Ungadli isipuni esingaphezulu kwesipuni futhi ngemuva kokudla (kathathu ngosuku).
Itiye eliwusizo kakhulu. Kungcono ukukhipha i-viburnum ekuseni, uphuze ntambama.
Kunemikhawulo embalwa kakhulu kumajikijolo anempilo. Lokhu ukukhulelwa, ukuphuma kwe-lactation, i-urolithiasis, ukuthambekela kwe-thrombosis, izifo zomgudu wokugaya ukudla.
Ukusetshenziswa kwezimali okusekelwe ku-viburnum kungenzeka ngemuva kokuvunywa kukadokotela ohambelayo.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi i-viburnum ene-hypertension ingumthombo osizayo wokunciphisa umfutho wegazi!
Futhi, umuntu akufanele akhohlwe ngokwenzeka komuntu emzimbeni. Noma ngubani ongakaze azame i-viburnum ngaphambili, kungakuhle ukuthi uqale udle amajikijolo amancane, uphuze ingilazi yesiphuzo sezithelo, inkomishi yetiye. Uma kungekho ukusabela okubi (okugayayo, okwaliwa yi-allergic), ungakwazi ukugcina kahle isitshalo esisebenzayo.